I-Apple isungula i-beta yesihlanu ye-iOS 9.3.3 | IPhone iindaba
I-Apple ikhupha i-beta yesihlanu ye-iOS 9.3.3
Kubonakala ngathi ngoku bayangxama: I-Apple isungule imizuzu embalwa edlulileyo I-beta yesihlanu ye-iOS 9.3.3. Oku kusungulwa kwenzeke kwiveki nje emva kwenguqulelo yangaphambili, ibeta yesine ethi Ndiyafika ngoJuni 29. Uhlaziyo ngoku luyafumaneka kwiziko lonjiniyela le-Apple okanye nge-OTA kubo bonke abasebenzisi ababene-beta yangaphambili efakiweyo.
IOS 9.3.3 yinguqulelo eya kubandakanya kuphela ukulungiswa okuncinci. Ukuthatha oku kuthathelwa ingqalelo, ingcebiso yethu yokungayifaki le beta okanye nayiphi na isoftware kwinqanaba lokuvavanya yenza ingqiqo ngakumbi, kuba iingxaki esinokuthi sihlangane nazo zingaphezulu kakhulu kwezibonelelo zokuvavanya le beta. Le nguqulo intsha kufuneka ifakwe kuphela ngabaphuhlisi okanye abasebenzisi abahlangabezana ne-bug ecaphukisayo kwi-iOS 9.3.2 kwaye bafuna ukuvavanya ukuba ngaba uhlobo olulandelayo luyayilungisa.
Emva kwe-beta 2 ye-iOS 10.0, eyesihlanu ye-iOS 9.3.3 ifikile
Le beta ifika kwiiyure nje ezingama-24 emva kokuphehlelelwa kwe-beta yesibini iOS 10.0. Ngokungafaniyo ne-beta yayizolo, le beta iyafumaneka kubasebenzisi abangaphuhlisi, nangona sele sitshilo ukuba, nangona kulindeleke ukuba ibandakanye ukusebenza, isantya kunye nokuphuculwa kozinzo, le nguqulo intsha ayifanele ukuzama ngaphandle kokuba Masibe ngabaphuhlisi okanye amava ubuncinci Umcimbi ocaphukisayo kwi-iOS 9.3.2, inguqulelo yamvanje esemthethweni ekhoyo.
Ukuthathela ingqalelo ukukhawuleza okunikwa ngolu hlobo, kunokwenzeka ukuba kule nyanga, mhlawumbi kwiiveki ezimbini, iApple izakwazisa i-beta yesithathu ye-iOS 10 yabaphuhlisi kunye neyokuqala yoluntu beta yenguqulo efanayo kunye neyokugqibela Inguqulelo ye-iOS 9.3.3. Njengamaxesha onke, ukuba ngaphandle kwesilumkiso sakho uthatha isigqibo sokufaka le beta intsha ye-iOS 9.3.3, ungathandabuzi ukushiya amava akho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 9 » I-Apple ikhupha i-beta yesihlanu ye-iOS 9.3.3
UFal Palacios sitsho
Shit i9.3.2 yokuqhekezwa kwejele lasePangu kwabo bangakhange bahlaziye, UKUBA KUPHUMA NGOKUBA yonke loo Jail inuka njengomsi. Ndinguye iipesenti ezili-10 zabantu abavalelwe entolongweni nge-9.1 SIIIIIUUUUUU !!!!
Phendula kuFer Palacios
UCarlos Hidalgo Jaquez sitsho
Asizukusala sinomnqweno wokuba ne-jailbrake ngo-9.3.2, mhlawumbi kwiminyaka emi-5 siyakuba nayo le nguqulo (9.3.2)
Phendula uCarlos Hidalgo Jaquez
Ndinenkqubo ka-Apple kawonkewonke ye-beta, i-iOS 9.3.3 beta 5 ayiveli ukuba ndinganceda
URodolfo Flores sitsho
Izinzile i-beta, yalungisa iingxaki ezininzi endandinazo nge-iPhone 6s yam. Umzekelo, yena
Ukusetyenziswa kwebhetri ngoku kuzinzile ngakumbi, akusekho kutsiba okukhulu kwaye akucimi kwi-30%. Kuyinto fluid kakhulu. Inye kuphela into endiyiqapheleyo ukusukela nge-9.3.2 kubandakanya i-9.3.3 beta 5 ethi xa urekhoda usebenzisa ibhetri eninzi. Ngomzuzu ngamnye orekhodayo, utya iipesenti ezi-3. Ndiyathetha, urekhoda isiqingatha seyure kwaye ishiya ifowuni yomile. . Ndiyathemba ukuba bayayilungisa loo nto kuba mhlawumbi isimilo sisebenzisa izixhobo ezininzi.
Phendula kuRodolfo Flores
IMicrosoft ilungiselela ukumiliselwa kweThinga.Me isicelo sokubamba kunye nokulungiselela izinto zokwenyani